Sunuwar bhasa Radio 2067-5-23 »
कोइँचहरुले व्यापार गर्ने कुरा मुश्किलैले कल्पना गर्न सकिन्छ । कोइँचमा जन्मिनु अगाडि नै लाहुरे सपना वीजारोपण भएको हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर नारायण सुनुवारको मन मस्तिष्कमा कहिल्यै विदेश भासिने सपना पलाएन । र त, उनी क्युरिओ साहु जी भएका छन् । अहिले उनी बिट्स (माला) उत्पादक तथा अधिकृत विक्रेता हुन् । उनीको उत्पादन चीन, ताइवान, भारत र जर्मनमा बढी जान्छन् ।
इँटा भट्टादेखि गर्लैचा मजदुर हुँदै आप्mनै पूख्र्यौली पेशा हस्ताकला उत्पादनमा भविश्य खोज्न पुगे । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँमा यस्ता काठको काम गर्ने सबै कोइँच (सुनुवर) हरु मात्र छन् । अरुले यस्ता काल उत्पादन गर्न नखोजेको होइन । तर चाहेर पनि उनीहरुले कोइँचको जस्तो कला सिक्न सक्दैनन् । यो हाम्रो परम्परागत पेशा हो ।’
दुई छोराका धनी उनी आमा धनमाया सुनुवार, शन्तमाया सुनुवार र बुुबा गोरे सुनुवारको जेठा छोरा दुइ भाई र तीन बहिनीहरुका दाजु हुन् । मदन भण्डारी उनका आदर्श पात्र हुन् । जीवनलाई संघर्ष ठान्ने उनी पलायनवादी होइनन् । गीत संगीत र चलचित्रतिर त्यति चासो उनी आफुले पालना गर्नु पर्ने अनुशासन नै जीवनमा बनाएको उन्नतिको आदर्श मान्यता हो । । उनीसँग प्रेमकुमार सुनुवार र उत्तम सुनुवारले उनकै एन्टिक आर्ट सप ठमेलमा लिएको कुराकानी :
तपाईको आप्mनै बारेमा अलिकति बताईदिनु होस न ?
म साधारण किसनको छोरा । प्रथामिक शिक्षा पलापुँबाट शुरु गरेको हुँ । फेरि सात, आठ पलापुँ मै पढेँ । अनि फेरि जनजागरण मावि हर्षाही सिन्धुलीबाट २०५२ सालमा एस एल सी गरेँ । एक जना गाउँले दाईको पछि लागेर ५२ सालमै काठमाडौं छिरेँ । मामा गाडी चालाक हुनु हुन्थ्यो । पाटन संयुक्त क्याम्पसमा भर्ना भएर मामासँग बस्दै इँट्टा काउन्टरको काम गरेँ छ महिना । फेरि टाइगर आर्ट, लगनखेलमा काम गर्न थालेँ । त्यहीको पसल मालिक इटहरीको दाइको सल्लाह मानेर एम एड गरेर गाउँ फर्किने सोचमा ताहाचाल क्याम्पसमा भर्ना भएँ ।
एक्लै कोठा नपाइने । जागिर खाउँ पढ्न नपाउने । पढौं जागिर नहुने । घरबाट खर्च ल्याएर नसकिने । जागिर र पढाइ छाडेँ र गाउँ फर्केँ ५३ मा । विद्यालयमै प्रेम बसेर होला गाउँ फर्किएँ बिहे गर्न । सजिलै कहाँ बिहे गर्न पाउनु सल्लाहले भाग्यौं काठमाडौं प्रेमिका गीता लुंगेली मगरसँग । सर्लाहीकै एक जना मगर साथी जोरपाटीमा थिए । उनकै साथ लागेर १० महिना काठमाडौं जोरपाटीमा बसेर गलैंचा बुन्यौं । प्रेममा शायद सबै दुःख सानातिना हुँदा रहेछन् क्यार । आफ्नो प्रेमिका पाएकोमै ठूलो विजय लागेको थियो । घर परिवारसँग सम्पर्क विच्छेद गरेरै बसियो । १० महिना पछि गाउँ फर्केँ । बुबाआमालाई कोसेली गर्भमा नाति बोकेर हामी छोराबुहारी । त्यसपछि जीवनको यथार्थ शुरु भयो । खर्चको खाँचो महसुस भयो । आफुलाई त बुबाआमासँग पैसा माग्दा सजिलै लाग्थ्यो बुहारीलाई पनि पैसा माग्न त लाजै भयो । अनि फाल्तु खर्च जुटाउने निहुमा हस्ताकलाको काम शुरु गरेँ । व्यापारीले गाउँमै आएर बटुल्थे । एउटा समानको दुई सय पाउथेँ । यसरी पैसाको खाँचो टार्ने सिलसिलामा यहाँसम्म आइयो ।
यहाँसम्म आइपुग्न के कस्ता चरणहरु पार गर्नु परेउ ?
बनाइन्थ्यो, अलि अलि पैसा आउँथ्यो बेचिन्थ्यो । खोइ कसरी हो काठमाडौं घुम्ने जाँगर चल्यो । अब यही हस्तकला खेलौना बोकेर घुम्न निस्किने हो भन्ने सोंच बन्यो । काठमाडौंमा सुनुवार साथीहरुले खासै दाम आउँदैन यही बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्थे । प्रति पीस दुई सयले बिक्री हुन्छ भन्थे काठमाडौंमा पनि ।। झनै कौतुहल भयो । र काठमाडौं आएँ बेच्ने हस्तकला समान बोकेर । कहाँ हो बेच्ने थाहै थिएन । ठमेल फुले बुढाकोमा जानुस् त्यही किनीदिन्छ भनेर पठाएका थिए साथीहरुले । सोराखुट्टेको एउटा हुटेलमा बसेँ । ठमेल छिरिन । दुइवटा समान लिएर बसन्तपुर गएँ । अहिले त्यस दाइलाई शिव दाइ भन्दा रहेछन् तर त्यतिवेला थाहा थिएन । यहाँ दुइवटा सामान ल्याएको थिएँ किन्नु हुन्छ भनेर सोधेँ । हेरौं न त भन्नुभयो । उहाँले सामानको कति भन्नु भयो ? साथीहरुले दुई सय गोटा जाने भनेका थिए । थाहै थिएन । कति भनेर सोध्नु भयो । मैले कति दिनु हुन्छ भने । तपाईका सामान कति भन्नुहुन्छ भन्नुभयो । मेरो समानको मोल त म गरिहाल्छु नि तपाई कति दिनु हुन्छ भनेर जवाफ दिएपछि उहाँले भन्नुभयो, दुइवटाको दुइ हजार दिन्छु हुन्छ । खुशीले के के भएँ भएँ । सपना जस्तै लाग्यो । दुइ सयमा बेच्छु भन्ने सोचेको थिएँ । दुई हजार । त्यसपछि सोचेँ अलिकति त बार्गेनिङ गर्नु पर्छ र तीन हजार दिने भए दिन्छु भने । अन्तमा २५०० सय दिनु भयो । भुइँमा खुटटै रहेन । फेरि हुटेल आएँ र सोर खुट्टे बाट तीन वटा समान बोकेर फुले बुढा खोजेर हिँडे । फुले बुढा भनेर अर्को फुले बुढा मानांगेलाई भेटेछु अहिले बुभ्mदा बाँकी सामान पनि तीन हजारमा बेचेँ र घर फर्किएँ । मेरो व्यापारको शुरुआत यहीँबाट भयो । यहाँको व्यापारिका वातावरण थाहा भयो । घर फर्केर आपैंm बनाउने अरुको हस्तकलाको सरसामान संकलन गर्ने कामको शुरुआत गरेँ । २०५९ सालसम्म घरैबाट त्यो काम गरेँ । ६० सालपछि बच्चा पढाउन काठमाडौं छिरेँ । ठमेलमा कोठा लिएँ । त्यसपछि ६१ सालतिर मालाको फेक्टरी शुरु गरेँ । मालाको होलसेल गरेँ । त्यसपछि ६४ सालबाट पसल शुरु गरेको हुँ । अहिले पोतेको, शंखको, पत्थरको माला बनाउने र बेच्ने काम गरेको छु ।
तपाई ओखलढुंगाको मान्छे किन सिँदुली झर्नु भयो ?
मामाहरु पहिला नै बसाइसराइ गर्नु भएको हुँदा छोराछोरीको शिक्षादिक्षाको लागि भित्री मधेश झरेको रहेछन् आमाबुबा । पहिला नै भएको कारण सिन्धुलीमा थोरै जग्गा किनीराखेको थियो रहेछ । बसाइ सरेपछि थप सम्पत्ति जोडियो ।
कसरी सिक्नु भयो यो हस्तकला ?
हामी कोइँचहरुको लागि राँबो बसिला चलाउनु सामान्य कुरा भइ नै हाल्यो । खुकुरी, कर्दा, हँसियासँग मुक्दुमि सम्बन्ध त छँदै छ । यसैले काठ, बाँस, ढुंगाको काम गर्नु नौलो कुरा भएन । त्यही हो बजारको माग के हो ? त्यति मात्र थाहा छैन । हाम्रो गाउँ (सिन्दुली)मा छिमेकीहरुले यस्तै काम गर्थे । खिलबहादुर सुनुवार भन्ने एक जना सहपाठी हस्तकलाकार हुनुहुन्थ्यो । पहिलो पटक उनैले मुखुन्डो बनाउन सिकाउनु भयो । त्यो पनि ख्यालख्यालमै । गुरु भेटी राखेको होइन । यस्तै हुन्छ कोइँच गाउँमा । सँग सँगै एकअर्काको सिप हेरेर सिक्ने हो ।
पहिला पटक बनाएको मकुन्डोको आँखाको छेउमै दुलो परेउ । तर पनि बिक्री भयो । घाटा परिन ।
एक पटकमा कति रुपैयाँको हस्तकला सामान बेच्नु हुन्थ्यो ?
खेलौना घोडा, हात्ती, घर, गाई गोरु, दुँधेरो बनाउँथे । एक लटमा १५०० देखि दुई हजारसम्मको सरसामान बेच्थेँ । तर आपैंmले बनाएर बेच्ने क्रम दुई वर्ष मात्र रह्यो । यही हस्तकालबाटै घरको सबै खर्चा टार्थेँ । पछिबाट मासिक आम्दानी तीस हजार जति हुन्थ्यो । यही काम गरेर जग्गाजमीन जोडेँ र घर बनाएँ ।
काठमाडौं चाहिँ किन पस्नु भयो ?
काठमाडौं पसेको धेरै भएको छैन, २०५९ मा मात्र हो । मुख्यतः म मेरो छोराहरुलाई राम्रो शिक्षा दिउँ र व्यापार गरुँ भन्ने उद्देश्यले यता छिरेको हुँ । मलाई लागेको थियो म यसै व्यवसायमा लागेर मेरो परिवार पाल्न सक्छु । २५हजार बोकेर काठमाडौं छिरेको म यस वीचमा ब्रासलेट, एन्टिक आर्ट कलेक्टरका रुपमा काम गरेँ । नेपालको धेरै भागमा पुगेँ । र, ६१ सालमा माला उत्पादनतिर जम्प गरेँ । पहिला बिट्स लासाबाट र नागल्याण्डबाट ब्रासलेट आउँथ्यो । अहिले यहीँबाट त्यसको आपूर्ति हुन्छ ।
मालाको काममा कसरी लाग्नु भयो ?
स्वयम्भूमा काठको माला बनाएको देखेको थिएँ । त्यसैले सिपीको खपटाको माला पनि यहीँ बनाउन सकिन्छ होला भन्ने लाग्यो र कबाडीमा गएर पानी तान्ने मोटर आठ सयमा किने र कटिङ प्लेट जोडेँ । शंख कटिङ गरेँ । भएको जति चुरा बनाएँ फुतेका जति माला बनाएँ । मालालाई चिल्लो बनाउने मिशिन बनाएँ । पुरै घरेलु आप्mनै प्रविधि प्रयोग गरेँ । फाइदा बस्यो । त्यो सँगै माग पनि बढ्दै गयो । त्यसैले यतातिर मन गयो । यतै स्थापित भइयो । पहिला त खाक्सी माला चिल्लो पार्ने गर्थेँ । धेरै माग आए पछि मास प्रोडक्सन गर्नु पर्ने भयो र आप्mनै बुद्धि लगाएर माला चिल्लो बनाउने मिशिन बनाएँ । हिजोआज पो थाहा भयो त त्यस्तो मिशिन किन्न पनि पाइँदो रहेछ नि विदेशमा । तर अहिले मेरो कोइँच बुद्धिको मिशिनले नै काम धानीरहेको छ त्यसैले अन्त ध्यान दिइन । यसो भनौं ख्यालख्यालमै पैसाको पछि लागेर यहाँसम्म आएको हुँ । समय र अनुभवले डोराएको मानिस हुँ । हाम्रो पूख्र्यौली पेशा हस्तकला बनाउनु भए पनि त्यस कलालाई व्यापार गर्नु पर्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारण विना योजनाको व्यापारी हुँ । अब भने सोच्दै छु । पत्थर कटिं चाहिँ पछि सिके । अहिले पत्थरको माला पनि बनाउँदै छु ।
अहिले तपाइसँग कति जना रोजगरीमा आवद्ध छन् ?
घरको बाहेक पाँच जना पूर्णकालिन कर्मचारी छन् । हामी घरकै चार जना छौं । अप्र
त्यक्ष कामदारहरु बाइस जना छन् ।
यस पेशाको भविश्य कस्तो देख्नु भएको छ ?
देशलाई सवल र आर्थिकरुपमा सम्पन्न बनाउनु छ भने यो पेशाको भविश्य राम्रो छ । तर देशले नेपाली कलाको बजार खोजीदिनु पर्छ । हामी आपैंmले खोजेको बजारले देशको अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन ।
तपाईको पसलको विशेषता के हो ?
सिपी र ढुंगाको माला उत्पादन गर्नु र वेच्नु नै मेरो पसलको मुल विशेषता हो । यसको आलवा एन्टिक आर्ट र उपाहारका अन्य सामाग्री पनि छन् ।
अघि नै भन्नु भयो यस्ता कला उत्पादन कोइँच (सुनुवार) को परम्परागत सीप हो भनेर । के उनीहरुलाई उनीहरुले बनाएको कलाको मूल्य पाउँछौं भन्ने ज्ञान छ ?
छैन । पक्कै पनि कोइँचलाई आप्mनो कलाको महत्तो थाहा छैन । यसको कारण के हो भने राज्यको केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणाली पनि हो । अहिलेसम्म कोइँचको बस्तीमा कुनै पनि व्यापारिक केन्द्र छैन । यसैले उनीहरुको अद्भूत कला प्रदर्शनी गर्न पाएका छैनन् । यसैले सधै देखी राखेको बनाइ राखेको कला भएको हुँदा उनीहरुको लागि सानो कुरा हो । विक्री गर्ने वस्तु होइन ।
जन्मजात कलाकार कोइँचहरुलाई यस पेशामा लागेको तपाईले उनीहरुको सीपलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ केही सोच्नु भएको छ ?
अघि नै भने मैले कुनै पनि काम योजनावद्ध गरिन । यसैले यतातिर पनि योजनावद्धरुपमा सोच्न भ्याएको छैन । तर भित्री मनमा कोइँचको कलालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकियला भनेर सोचीरहेको छु नै । कति साथीलाई भनेको पनि छु । यो अलग व्यवसाय देखेर होला त्यति इच्छा गरे जस्तो भने लागेको छैन् । काठबाट भन्दा ढुंगाबाट बन्ने कलालाई प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने भविश्य राम्रो छ ।
सरकारले कस्तो सहुलियत प्रदान गरोस् भन्ने जस्तो लाग्छ ?
अहिलेलाई नै हेर्ने हो भने मलाई त काम गर्न विद्युत नै नियामित दिए हुन्थ्यो । तर हस्तकला प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विदेशी भूमिमा हुने प्रदर्शनीमा सहभागी गराउने । बजार प्रवद्र्धन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो । विदेश जाने समानमा भन्सार छुट हुनु पर्छ । किनभने हस्तकलाले शत प्रतिशत अर्थ स्वदेशमै सञ्चित गर्दछ ।
तपाईले गरेको व्यापारले देशलाई के कस्तो फाइदा भएको छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?
प्रत्यक्ष छैन । अप्रत्यक्ष छ । विदेशी मुद्र स्वदेश भित्री रहेको छ । नेपालको पहिचान पस्केको छ ।
आर्थिक खाँचो नेपालीहरुलाई छ । उनीहरुको हातमा कला छ । तर उनीहरुको कला नेपालमा विक्रि हुँदैन । कोइँचको सीपलाई उपयोग गर्न के गर्न सकिन्छ होला ?
राष्टिरिये प्रदर्शनी भइरहेका छन् । त्यसमा भाग लिँदै जाने । गाउँसम्म पुग्ने गरी प्रबद्र्धनको बाटो खोज्ने । यस्तो काम प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्नु परेउ । विना धितो ऋण दिनु परेउ । सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने आदिवासी कोइँच वा नेपालीहरुलाई के सल्लाह दिनु हुन्छ ?
यो त्यस्तो क्षेत्र हो जसलाई नुनभुटुनको लागि जस्तै ग्राहाकले लगानी गर्दैन । यसैले फाइदा हुन्छ भनेर अन्धाधुन्दा सिधै लगानी गर्नु भन्दा पनि अध्ययन गरेर, बुझेर लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ ।
यस्ता कला उत्पादन गर्ने नेपालीहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
त्यस्ता पुरानो सरसामान छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस व्यापार गरिदिन्छौं ।
तपाईको हातमा सीप छ भने आपैंmले बजार पनि खोज्नु होस तपाईको लागि अर्का मानिसले कहिल्यै बजार खोज्दैन । व्यापार भनेकै बजार प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धासँग नडराउनुस् ।
3 Responses to “जीवन संघर्षमा पैसाको लागि कला सिर्जना गर्दै जाँदा…”
badhai chha mitra tapaian ko jun gareko kura safal rahos agami din haru ma ajha adhunik rup ma yesko bikash garna agraha gardachhu .